Momba anay - Hebei Chengye Intelligent Technology Co., Ltd.
Hebei ChengYe Intelligent Technology Co., Ltd. (Code Equity: 838358) dia natsangana tamin'ny 2007. Any amin'ny faritra ara-toekarena sy ara-teknika, Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei, ny orinasanay dia manokana amin'ny fikarohana sy famokarana milina fanodinana sakafo ary fitaovana tsy mahazatra. Ny orinasanay dia lasa mpanamboatra lehibe amin'ny indostrian'ny sakafo.
Ny masininay dia ampiharina amin'ny indostrian'ny fanodinana hena, ny sakafo wheaten ary ny indostrian'ny fanodinana sakafo malaky.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny Dester Fatin-kena Frozen telo heny, ny fanapahana lovia haingam-pandeha, ny Smokehouse, ny vacuum refrigeration Tumbler, ny mixer vacuum flourter, ny tsipika fanodinana noodle, ny milina fanaovana Shaomai, ny milina fanodinana legioma sns.
Ny orinasantsika dia manana patanty nasionaly marobe, ny vokatra lehibe dia nandalo CE Certification, namidy tany Eropa, Oceania, America, Africa, Mideast ary Azia atsimo atsinanana ary nahazo laza tsara teo amin'ny mpanjifa.
Fampivoarana ny teknolojia
Amin'ny maha orinasa teknolojia avo lenta antsika, dia manadanja ny fampandrosoana ara-teknolojia izahay, mandritra izany fotoana izany, miorina amin'ny famolavolana matanjaka sy ny fahaizan'ny fananganana Chengye Construction Group, dia afaka manolotra serivisy serivisy sy fanohanana ara-teknika izahay, toy ny fanarenana sy fanitarana ireo ozinina, fandrindrana ary famolavolana tany, atrikasa fananganana, fametrahana sy fanendrena fitaovana sy fantsona sakafo sns.
Azo ampiharina sy manavao, ny olona ChengYe dia manaraka ny filozofia fitantanana: "Fahadiovam-po sy kalitao voalohany" ary ny teoria soatoavin'ny "Mpandraharaha marina sy azo ampiharina, manavao, miankina amin'ny tena ary mpandraharaha tsy miato", miezaka ny ho lasa orinasa teknolojia sy manan-tsaina kilasy voalohany!